Soosaarayaasha Chef Hats - Shiinaha Shirkadaha Chef Hats & Warshadaha
Koofiyadda Chef Hat Poly Sine Coly Wine Cas midabkeedu yahay Chef Hat U402S0400A
Nooca CHECKEDOUT Sheyga Koodhka U402S0400A Cabbirka SI KOOX AH Erayada furaha qafiifka ah Dharka 65/35 poly / suufka GSM.235g Xinjiang Aksu dheer-cudud, cuf-la'aan, wax-uruur la'aan, kansar-qabe, noloshu adeegtu waa 2 jeer sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awoodda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, ciriiriga oo hooseeya, hygrosco wanaagsan ...
Koofiyadda Chef Hat Poly cudbiga madow Chef Hat U404S0100A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U404S0100A Cabbirka S, M, L Erayada muhiimka ah chef hat Fabric 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu dheer-suuf, cuf-la'aan, wax-uruur la'aan, kansar-qabe, noloshu adeegga waa 2 jeer sida caadiga ah jaakad qafis. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican oo burbursan, jajabinta hoose, hygroscopic wanaagsan ...
Koofiyadda Chef Hat Poly Cufan White Chef Hat U404S0200A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U404S0200A Cabbirka S, M, L Erayada muhiimka ah chef hat Fabric 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu dheer-suuf, cuf-la'aan, wax-uruur la'aan, kansar-qabe, noloshu adeegga waa 2 jeer sida caadiga ah jaakad qafis. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican oo burbursan, jajabinta hoose, hygroscopic wanaagsan ...
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CU404S0100A Cabbirka KALKA SIINA Erayada ugu muhiimsan chef hat Fabric 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu dheer-suuf, koronto-la'aan, wax-is-beddelin, lahayn cudurka kansarka, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awoodda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, hoos udhaca, hygrosc wanaagsan ...
Koofiyadda Chef Hat Poly cudbi Khudaarta Casaanka ah ee loo yaqaan 'Chef Hat U404S0400A'
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U404S0400A Cabbirka S, M, L Erayada muhiimka ah chef hat Fabric 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu dheer-suuf, cuf-la'aan, wax-uruur la'aan, kansar-qabe, noloshu adeegga waa 2 jeer sida caadiga ah jaakad qafis. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican oo burbursan, jajabinta hoose, hygroscopic wanaagsan ...
Nooca CADADKA CODKA CU404S0200A Cabbirka KOOXDA SIILAAN AH Erayada furaha qafiifka ah Dharka 65/35 poly / suufka GSM.235g Xinjiang Aksu dheer-suuf, koronto-la'aan, wax-uruurin la'aan, kansar-qabad, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awoodda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, hoos udhaca, hygrosc wanaagsan ...
Unisex Poly cudbi mugdi ah oo midabkeedu yahay 'Chef Hat U404S1200A'
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U404S1200A Cabbirka S, M, L Erayada muhiimka ah chef hat Fabric 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu dheer-suuf, cuf-la'aan, wax-uruur lahayn, kansar-qabe, noloshu adeegga waa 2 jeer sida caadiga ah jaakad qafis. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican oo burbursan, jajabinta hoose, hygroscopic wanaagsan ...
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CU405S0100A Cabbirka KALKA SIZE Erayada ugu muhiimsan chef hat Fabric 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu dheer-suuf, koronto-la'aan, wax-is-beddelin, kansar-qabe, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awoodda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, hoos udhaca, hygrosc wanaagsan ...
Unisex Poly Cotton Flat Top Jabhadda Style Chef Hat U405S0100A
Nooca CHECKEDOUT Sheyga Koodhka U405S0100A Cabbirka KALKA SIILA Erayada furaha ah koofiyadda qafiska, koofiyadda qafiska sare ah, Kuleylka Jabaqda ah ee dharka ah 65/35 poly / suufka GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dheer-dheer, cirib la'aan, ciriir la'aan, majirto wax-qabad, adeeg Noloshu waa 2 jeer sida jaakad qafis caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, naaqus-reebka wanaagsan ...
Poly cudbi madow White Strip Flat Top Chef Hat CU405S8600H
Nooca CUDURKA CUTUBKA CU405S8600H Cabbirka KOOXDA Erayada muhiimka ah chef hat Fabric 65/35 poly / cudbi Xinjiang Aksu dheer-suuf, cirib-tirka, mala-gooyo, majirto kansar, nolosha adeega ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga oo hooseeya, hygroscopicity wanaagsan ...
Nooca CADADKA XARUNTA U405S8300H Cabbirka SI KOOX AH Erayada furaha ah koofiyadda qafiska ah, koofiyadaha qafiska sare ee Jabbuuti, Koofiyadaha qafiifka ah ee dharka loo yaqaan 'poly poly' suufka Xinjiang Aksu dheer-suufka adag, aan-kiniiniga lahayn, aan-ruxin, lahayn cudurka kansarka, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah mid caadi ah jaakad qafis. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican oo baabi'inta, hoos u dhac ...
Koofiyad Chef Black Chef Koofiyad ah oo ay ku jiraan jeebka timaha CU413S0100A
Nooca CADADKA EE COD Code CU413S0100A Cabbirka KALKA SIZE Erayada ugu muhiimsan chef hat Fabric 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu dheer-suuf, koronto-la'aan, wax-is-beddelin, kansar-qabe, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awoodda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, hoos udhaca, hygrosc wanaagsan ...